မျက်ခမ်းကိုဆင်း-နှငျ့သငျစျေးကြီးလိမ်းဆေးနှင့် Salon ပေါ်တွင်လူကြိုက်များချက်ပြုတ်နည်းများများအတွက်အိမ်မှာငွေမရှိသောလုပျအကြောင်း, flabby ဖြစ်လာသည်။ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
မျက်ခမ်းကိုဆင်း-နှငျ့သငျစျေးကြီးလိမ်းဆေးနှင့် Salon ပေါ်တွင်လူကြိုက်များချက်ပြုတ်နည်းများများအတွက်အိမ်မှာငွေမရှိသောလုပျအကြောင်း, flabby ဖြစ်လာသည်။
ကောင်းစွာအပျော့အနှိပ် hypericum ၏အေးမြသောပြုတ်ရည်ကနေအစဉ်အမြဲလိမ်းလုပ်ဖို့နေ့တိုင်းအပြင်, Taco ပြုတ်ရည်အရေပြားတင်းကြပ်။ လက်ဖက်ရည် zelnogo ထံမှ Esze လိမ်းလုပ်ပါ။ ငါသည်ဤ esch masochku အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ Botox doroguschego တစ်ခု analogue အဖြစ်ကိုဖန်ဆင်းသော
အဆိုပါမျက်နှာဖုံးရေ၏ထက်ဝက်တစ်ဖန်များတွင်ပျော်ဘယ်ဟာအာလူးကစီဓါတ် (1 စားပွဲပေါ်မှာ။ အယ်လ်) ၏အခြေခံပေါ်တွင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေ၏ထက်ဝက်တစ်လီတာထည့်သွင်းသောကွန်တိန်နာသို့သွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရောအနှောအထူသည်အထိပြုတ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါလောလောလတ်လတ်ညှစ်မုန္လာဥနီသီးဖျော်ရည်များနှင့် 1 ဇယားငါးခုဇွန်းအဲဒီမှာကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အချဉ်မုန့်တစ်ဇွန်း။ အဆိုပါမျက်နှာဖုံးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောနှောနှင့်မျက်ခမ်းအပေါ်မှာပါးလွှာသောအလွှာအရေးအကြောင်းတွေမိနစ် 20-25 ၏ဧရိယာလျှောက်ထားသည်။
ထို့နောက်သူကပူနွေးတဲ့ရေနှင့်ချွတ်ဆေးကြောခြင်းနှင့်, သင်တို့အဘို့ uvlazhnayuschy အချို့ကိုမျိုးညာဘက်သောမုန့်ကိုလျှောက်ထားရပါမည်။
ဤသည်မျက်နှာဖုံးသိသိသာသာ, အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ခြံဖယ်ရှားအသားအရေ moisturizes နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်နီးပါးနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား Botox တူသောဆောင်ရွက်သည်။ တစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်ရလဒ်အဘို့, မျက်နှာဖုံးသုံးရက်အဘို့ပြုရပါမည်။
သင်မုန့်သို့မဟုတ်ထောပတ်လျှောက်ထားသည့်အခါမျက်စိဧရိယာများအတွက်အနှိပ်, သငျသညျ, ယခုအချိန်တွင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကြီးမားဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မျက်စိပုံများအတွက် Anti-အိုမင်းစောင့်ရှောက်မှုနှင့် တွဲဖက်. တစ်ဦးအနှိပ် (ဒီတွဲဖက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရလဒ်များကိုပေးသည်) ရှိပါတယ်။
1 ။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်မကျြစိကိုပတ်လည်ရှိဧရိယာပေါ်တွင်သူမ၏လက်ချောင်းများကိုနှိပ်။
2 ။ ညင်ညင်သာသာမျက်စိလက်ချောင်းထိပ်ပြင်ထောင့်ကိုနှိပ်ပါ။ ဤအရပ်တွင်ဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးလည်ချောင်းနာအရေးအကြောင်းတွေအာရုံစိုက်, ဒါခေါ်ကျီးကန်းခြေ။
3 ။ နှာခေါင်းဖို့မျက်စိအောက်မှာထို့နောက်မျက်စိ၏အပြင်ဘက်၌ထောင့်ဖို့မျက်ခုံးအောက်ရှိဧရိယာပေါ်တွင်မျက်စိများ၏အတွင်းစိတ်ထောင့်အပေါ်လက်စွပ်ကိုလက်ညှိုး pads တွန်းများနှင့်လွယ်ကူစွာသွားလာရကြ၏။
4 ။ Make ကမျက်စိတစ်စုစုပေါင်းတာဝန်ခံလုပ်ဖို့စည်းကမ်းအချိန်မတန်မီအရေးအကြောင်းတွေနဲ့အမြင်အာရုံချို့ယွင်းကောင်းတစ်ခုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
မဆိုအရေပြား, မျက်တောင်၏အသားအရေမသာ, တင်းကြပ်နှင့်ရေကုသမှုခြားနားခြင်းဖြင့်ပိုပြီး elastic ဖြစ်လာသည်။ တနည်းနွေးခြင်းနှင့်ရေအေးဆေးကြောပါ။ (သင်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များပြုတ်ရည်သို့မဟုတ်လွင်ပြင်ရေအေးခဲနိုငျသညျ) ရေခဲနှင့်အတူမျက်နှာနှင့်မျက်စိဧရိယာ Wipe ။
#9829; ညဥ့်လုပ်-Up မှာ flush မကျင့်,
#9829; squint နှင့်မျက်မှောင်ကြုတ်;
(အထွက်နှုန်းသာသေးငယ်တဲ့တင်ပါသည်အပေါ်ယံအရေးအကြောင်းတွေ) အတော်လေးခက်ခဲမျက်နှာကနေအရေးအကြောင်းတွေဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြောင့်, မျက်ခမ်းနှင့်မျက်စိတစ်ဝိုက်အရေပြားကာကွယ်ပါ, သင်မူကား၎င်းတို့၏ဖြစ်ပျက်မှုအတော်လေးနိုင်စွမ်းကိုတားဆီး!
64 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,227 စက္ကန့်ကျော် Generate ။